December 2020 – မြန်မာသတင်းစုံ
Jan လို့ခေါ်တဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံအမျိုးသားတစ်ဦးဟာ Monica ဆိုတဲ့အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့(၁၉၉၃)ခုနှစ်က လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးလက်ထပ်ရေးမှာ အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီကြားထဲက ရအောင်လက်ထပ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့နှစ်ဦးအကြား ယုံကြည်မှုပြိုကွဲစေမယ့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Jan လက်ထပ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ မိန်းမအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ (၁၉)နှစ်ကြာမှပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အမှန်တရားကြောင့်ပါ။ ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားကျူးလွန်ခံလိုက်ရသလို ခံစားရတယ်။ကျွန်တော့်သူ့ကို ဘယ်လ်ဂျီယံကို လွယ်လွယ် ကူကူ ခေါ်လာခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးရဲ့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်စစ်ဆေးမှုတွေကို ခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေ မယ့် နောက်ဆုံးတော့ လက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ တကယ့်ကိုစွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်။ အလုံးစုံမိန်း မပဲ။ယောက်ျားဆိုတဲ့ ပုံစံလက္ခဏာမျိုး လုံးဝကိုမရှိခဲ့တဲ့သူပါ။သူမက မိန်းမအစစ်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို အိပ်ယာပေါ် မှာတောင်မှ ကျွန်တော်သတိမထားမိခဲ့ဘူးလို့ Jan ကပြောပါတယ်။ Monica တစ်ယောက် အချိန်ပြည့်အလုပ်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ လက်ထပ်ခြင်းဟာ စပြီးပြိုကွဲလာခဲ့ပါ တယ်။သူမဟာ Jan ရဲ့ကလေးတွေအတွက် အစ်မကြီးတစ်ယောက်လို ဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ […]
Posted on December 24, 2020 Author admin	Comments Off on (၁၉)နှစ်ကြာအောင် ပေါင်းသင်းပြီးမှ ဇနီးဖြစ်သူဟာ မိန်းမအစစ်မဟုတ်ကြောင်း သိလိုက်ရသူ
မြင့်မြတ်က နာမည်နဲ့လိုက်အောင် မြင့်မြတ်ပါတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ယုန်လေး ======================================= လတ်တလော ပရိသတ်တွေကြားမှာ မိသားစုရေး အိမ်တွင်းရေးကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေခံနေရတဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ယုန်လေးက သူရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်က ရှင်းပြပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းလောက်က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ မြင့်မြတ်ရဲ့ဖခင် Taxi မောင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မြင့်မြတ်တစ်ယောက် ဝေဖန်မှုတွေကို ခံနေရတာပါ။ ယုန်လေးကတော့ မြင့်မြတ်ဟာ မိဘအပေါ်မသိတတ်တဲ့ သားတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဝေဖန်မှု တွေမစောပါနဲ့လို့လည်း ပြောထားပါတယ်။ “လူတိုင်းကို အမြင်မတော်ရင် ကူညီနေတဲ့ မြင့်မြတ်၊ သူ့အဖေ၊ အမေအရင်းကို ဘာမှမလုပ်ပေးဘူး။ ကျေးဇူး မသိဘူးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ သေချာစဉ်းစား စေချင်ပါတယ်။ ဝေဖန်တာ မစောစေချင်ပါ ဘူး။ တစ်လောကလုံးလည်း သူ့စိတ်ထား […]
ကွိုးစားရှာဖှပွေီးစုဆောငျးထားကွတဲ့ ကြောကျစိမျးတှထေဲမှ သိနျးခြီတနျလကျစှပျတှကေို မဲဖောကျပေးသှားမယျ့ နဆေနျးတို့ဇနီးမောငျနှံ ပရိသတျကွီးရေ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျနဆေနျးဟာဆိုရငျ တဈခတျေတဈခါကတညျးက အနုပညာအလုပျတှကေို တစိုကျမကျမကျလုပျဆောငျလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ နဆေနျးက ယနအေ့ခြိနျထိလညျး အနုပညာအလုပျတှကေိုဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျလုပျဆောငျနဆေဲဖွဈပွီး ငယျငယျတုနျးကအတိုငျး နုပြိုခနျ့ညားနဆေဲဖွဈပါတယျနျော။နဆေနျးက သားတဈယောကျ၊သမီးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ဖခငျဖွဈပွီး ပြျောရှငျအေးခမျြးတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို တညျဆောကျထားတာဖွဈပါတယျ။ နဆေနျးက သူ့အပျေါအရမျးကောငျးတဲ့ဇနီးသညျလညျးရှိတာကွောငျ့ အိမျထောငျကတြာအရမျးကံကောငျးပါတယျနျော။နဆေနျးတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျက စီးပှားရေးဆိုလညျး တကျညီလကျညီလုပျဆောငျကွတာဖွဈလို့ လကျရှိမှာဆိုရငျတော့ “နယူးခဈြတီး”ဆိုတဲ့ ထမငျးဆိုငျလေးကိုဖှငျ့ထားကွတာဖွဈပါတယျ။နဆေနျးတို့ရဲ့ထမငျးဆိုငျကလညျး ရောငျးအားကောငျးပွီး စားသုံးသူတှမြေားပွားလို့ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ ပိုပိုအောငျမွငျလာတာဖွဈပါတယျနျော။ အခုဆိုရငျတော့ နဆေနျးတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျက သူတို့ရဲ့ဆိုငျမှာစားသုံးကွတဲ့သူတှကေို ကြေးဇူးတုံ့ပွနျတဲ့အနနေဲ့ မဲဖောကျပေးမှာဖွဈပါတယျ။နဆေနျးတို့က သူတို့စုဆောငျးထားတဲ့ ကြောကျစိမျးတှထေဲမှာမှ သိနျးခြီတနျတဲ့လကျစှပျ‌(၅)ကှငျးကို ဒီနညေ့နေ (၄)နာရီတိတိမှာ ပေးမှာဖွဈပါတယျနျော။နဆေနျးတို့မိသားစုကတော့ အခုလိုမြိုး သဒ်ဒါတရားထကျသနျပွီး ရကျရကျရောရောလှူတတျလို့ စီးပှားဥစ်စာတှေ ဒီရအေလားတိုးတကျပွီး ပိုအောငျမွငျဦးမှာဖွဈပါတယျ။ပရိသတျကွီးလညျး ညနေ(၄)နာရီကိုစောငျ့ပွီး နဆေနျးတို့ရဲ့”နယူးခဈြတီး” Facebook pageမှာ ဝငျရောကျကံစမျးလိုကျကွပါဦးနျော။ ကွိုးစားရှာဖှပွေီးစုဆောငျးထားကွတဲ့ ကြောကျစိမျးတှထေဲမှ […]
“ပြန်တော့မှာလားကွ” “သွားတော့မယ် ကိုကြီးစိုးရာ အိမ်မှာက တီလေးတယောက်ထဲဗျ” “ဗညားရာ မင်းလဲ မိန်းမတောင် ရပါဦးမလားကွာ” “အဲ့ဒါတွေက နောက်မှပါဗျာ အရေးကြီးတာက ကျနော့်ရဲ့ တဦးတည်းသောဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့ ကျနော့်အဒေါ်ပါဗျာ” “အေးပါကွာ သိပါတယ် ငါကစတာပါကွာ ကျေးဇူသိတတ်တာ မမှားပါဘူး ဗညားရာ” ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ဗညားအိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့လေသည်။ ဗညားရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံက ဗညားမောင်မောင်။ စက်မှုတက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်ကို ဗိသုကာဘာသာရပ်ဖြင့် တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသားတယောက် ဖြစ်သည်။ သူကတဦးထဲသောသားဖြစ်ကာ သူခြောက်တန်းအရောက်တွင် ကားမတော်တဆမှုဖြင့် မိဘများ ကွယ်လွန်ခဲ့လေရာ သူ့အမေ၏ ညီမအရင်း တီလေးဆုမြတ်နှင့် သူ့ယောက်ျား အန်ကယ်လင်းသူက စောင့်ရှောက်ခဲ့လေသည်။ အဖေကလည်း တကောင်ကြွက်ဖြစ်ကာ အမေဘက်ကလည်း ပြေးကြည့်မှ ညီမနှစ်ယောက်ရှိသည်ဖြစ်ရာ။ ဗညားဘဝမှာ ဆွေမျိုးဆို၍ တီလေးဆုမြတ် တယောက်ထဲသာ ရှိလေသည်။ သို့သော် […]
Posted on December 23, 2020 Author admin	Comments Off on နိုးထလာသောစိတ် ………… ရှယ်နိပ် ဖတ်ရူ့ပါရန်။
Posted on December 23, 2020 December 23, 2020 Author admin	Comments Off on ရင်းနှီးသူ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းတောင် မကြည့်ရက်ဘူးဆိုတဲ့အထိ အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းခံစားနေရှာတဲ့ မြင့်မြတ်
ဦးခေါင်းအဆမတန်ကြီးလာသည့် ကလေးငယ်အား ဆေးကုသရန် အကူအညီလိုအပ်နေ
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့ နယ် မြလေးကျေးရွာအုပ်စု အ လန်းကြီးကျေးရွာရှိ ဦးခေါင်းပိုင်း ရောဂါခံစားနေရသည့် (၁၀) လ သားအရွယ် ကလေးငယ်သည် မွေးဖွားပြီး လေးလအကြာတွင် ဦးခေါင်းမှာ တဖြည်းဖြည်း အဆ မတန်ကြီးမားလာသည့်ပြဿနာ နှင့် ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေ ကြောင့် ကလေးငယ်၏ မိဘနှစ်ဦး စလုံးမှာ ကလေးငယ်အား ဆေး ကုသပေးနိုင်ရန် ကိုဗစ်ကာလအ တွင်းမှာပင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ စွန့်စား သွားရောက်ကာ ငွေရှာခဲ့သော် လည်း အဆင်မပြေသဖြင့် ကလေးကို ဆေးကုသမှုမပေးနိုင် သေးကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် တွင် ကလေးငယ်အား အ ထောက်အပံ့အချို့ သွားရောက် ကူညီခဲ့သည့် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်နေ ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်က ပြောသည်။ အဆိုပါကလေးငယ်သည် လက်ရှိတွင် အဘိုး၊ […]
Posted on December 23, 2020 Author admin	Comments Off on ဦးခေါင်းအဆမတန်ကြီးလာသည့် ကလေးငယ်အား ဆေးကုသရန် အကူအညီလိုအပ်နေ
ကြီးမနိုးစတေီမှာ ရောငျခွညျတျော ကှနျ့မွူးနတေဲ့ရုပျသံ
ကြီးမနိုးစတေီမှာ ရောငျခွညျတျော ကှနျ့မွူးနတေဲ့ရုပျသံ အောကျဆုံးတှငျvideoပါသညျ….. ကြီးမနိုးစတေီမှာ ရောငျခွညျတျော ကှနျ့မွူးနတေဲ့ရုပျသံ ကြီးမနိုးစတေီမှာ ရောငျခွညျတျော ကှနျ့မွူးနတေဲ့ရုပျသံ ကြီးမနိုးစတေီမှာ ရောငျခွညျတျော ကှနျ့မွူးနတေဲ့ရုပျသံ ကြီးမနိုးစတေီမှာ ရောငျခွညျတျော ကှနျ့မွူးနတေဲ့ရုပျသံ Videoကွညျ့ရနျ… Post Views: 112
Posted on December 23, 2020 Author admin	Comments Off on ကြီးမနိုးစတေီမှာ ရောငျခွညျတျော ကှနျ့မွူးနတေဲ့ရုပျသံ
၇တန်းအောင်ပြီး၈တန်းတတ်စလောက်ကပေါ့ အရွယ်လဲနည်းနည်းရောက်လာပြီလူပျိုဝင်လာပြီစိုတော့ကာမစိတ်တွေလဲတဖွားဖွားပေါ့ တစ်ဖွားဖွားစိုတာနဲ့တွေ့သမျှဖင်တွေကြည့်ပြီးအိမ်ရောက်ရင်မှန်းမှန်းထုရတာကလဲအရသာရှိသကိုး.. ၈တန်းကျောင်းစတတ်တော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကလဲလူအေးစိုတော့သိပ်အပေါင်းသင်းမရှိဘူး ကျွန်တော်ပေါင်းမိတဲ့ကောင်ကလဲလူအေးဘဲစိုပါတော့ နာမည်က”မြတ်မင်း”တဲ့အေးလိုက်တဲ့ပုံများရေခဲတုံးကြနေတာဘဲ။ အဲ ဒါပေမယ့်တနှာကာမတော့ကြီးရော ဒါကတော့ကျွန်တော်ရောဘဲလေ အတန်းထဲမှာမြန်မာစာသင်တဲ့ဆရာမအိမ်နဲ့မြတ်မင်းအိမ်ကကပ်လျက်ဘဲ အဲ့ဒီဆရာမနာမည်က”ဒေါ်ဥမ္မာကျော်”တဲ့ဗျ။ စာအရမ်းအသင်ပြကောင်းတယ်အမြဲတန်းမျက်နှာလေးကပြုံးပြုံးရွင်ရွင်ဘဲ အသက်ကတော့..၂၄လောက်ရှိပြီထင်တယ်ခုထိနုပြိုထွားကြိုင်းနေတုန်းဘဲ မြတ်မင်းစိူတဲ့အကောင်ကလဲဆရာမရေချိုးနေရင်ခိုးခိုးကြည့်ပြီးအိုးတွေတောင့်ကြောင်းနို့တွေကားကြောင်းကျွန်တော့်ကိုပြောပြောနေကြဗျ။ ဟုတ်တယ်ဗျဆရာမကဖင်ကအကြီးကြီးဘဲတောင့်တင်းနေတာဘဲတစ်ခါတစ်လေစိုဘစ်ယာပါထင်းနေတာဘဲ.အရပ်တော့ပုတယ်ဗျ ပုပုထွားထွားလေးပေါ့.ကျောက်သင်ပုန်းကိုမမှီလို့ခြေထောက်ထောက်ပြီးစာရေးနေရင်ထဘီနဲ့အင်္ကျီဟဟလေးထဲကအသားလေးတွေကဝင်းနေတာဘဲ.ဘော်လီအဖြူလေးတောင်မြင်နေရတယ်.တစ်နေ့ကျွန်တော်နဲ့မြတ်မင်းကျောင်းတတ်ခေါင်းလောင်းအသံမကြားမိဘဲကျောင်းဆီးခြံမှာဆရာမအကြောင်းဖလှယ်ပြောရင်းကာမဆာလောင်နေကြတယ်။ အဲ့အချိန်ဆရာမရောက်လာတယ်.ဆရာမကအတန်းပိုင်စိုတော့ဘာနေနေအစွန်းထင်းမခံဘူးလေလိုက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကို.ကျွန်တော်တို့ကလဲအားတိုင်းဆီးခြံဘဲသွားနေတော့ဆရာမကသိနေတာ. “ဟဲ့”မြတ်မင်းနဲ့ ကျော်ကျော်” ကျောင်းတတ်နေပြီလေ နင်တို့မသိဘူးလား”ကျွန်တော်တို့ဆရာမအသံကြားတော့လန့်ပြီးထလိုက်တာခုနကဆရာမအိုးအကြောင်းပြောရင်းလီးကို၂ယောက်သားစွနေတာ ခုထလိုက်တော့တောင်ပြီးတန်းနေတာဘဲဆရာမအဖုတ်ကို.ဆရာမမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးမသိခြင်ယောင်ဆောင်ပြီး။ “ဟဲ့”လာကြဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲငါ့နောက်လိုက်ခဲ့စာသင်မယ်” ဟုတ်ဟုတ်ဆရာမ” “ကျွန်တော်တို့၂ယောက်လဲလီးတွေမြင်သွားတဲ့ဆရာမကိုမျက်နှာမကြည့်ဘဲခေါင်းငုံပြီးနောက်ကလိုက်လာကြတယ်.မြတ်မင်းကတိုးတိုးလေးပြောတယ်”ကျော်ကျော်”ဟေ့ကောင် ဆရာမဖင်ကြီးကြည့်စမ်းဘစ်ရာထင်ပြီးတင်းနေတာဘဲဟ”အေးကွလိုးချင်စရာကြီး ။ “ဆရာမဖင်ကိုဒီတစ်ခါအနီးကပ်သေချာမြင်ဘူးတာဘဲ”လိူးချင်လိုက်တာကွာ”ဟူကျွန်တော်လဲတီးတိုးပြောလိုက်တယ်”။ ဆရာမကကြားသွားပုံရတယ်ဗျကျွန်တော်တ်ု့ကိုနောက်လှည့်ကြည့်ပြီး”သေမယ်နော်ဟဲ့အကောင်တွေ”မိုက်မရိုင်းကြနဲ့ဟွင်း” လန်းသွားတာပေါ့ ဆရာမကြားတယ်ဟတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လက်ကုတ်ရင်းမချိပြုံးပြူံးပြီးလာခဲ့ကြတယ် စာသင်ခန်းထဲရောက်တော့ဆရာမမျက်နှာကပြုံးတာလိုလိုရှက်တာလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်feelတွေတတ်နေလားမသိဘူး ပေါင်ကြားထဲလက်ထည့်ပြီးကျောင်းသားတွေကိုစာလိုက်ဖတ်ခိုင်းနေတာ။ နောက်နေ့မနက်ဒီနေ့ကဆရာမကိုမလိူးခင်တစ်ရက်ပေါ့ ကျွန်တော်နဲ့မြတ်မင်းမနေ့ကဆရာမအိုးအကြောင်းပြောရင်းရီရီမောမောကျောင်းလာကြတယ်။ အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့မြင်ခွင်းကစိတ်ထဲတလပ်လပ်နဲ့ပေါင်ကြောကနေတစ်ဆင့်လီးကြောထဲထိဖီလ်းတွေရောက်လာပြီးလီးပါမသိမသာတောင်လာတယ်.ဘာလို့စိုတော့ ဆရာမဒီနေ့ဝတ်လာတဲ့အပေါ်အင်္ကျီအဖြူကအပါးသားလေးအထဲကိုထင်းထင်းနေအောင်မြင်နေရတာ မြင်လား မြတ်မင်း ဆရာမနို့အုံကအကြီးကြီးဘဲဖြူဖွေးနေတာဘဲဟ။ အေးကွကျော်ကျော်ရ ဆံပင်ကနေဆွဲပြီးလိုးလိုက်ရင်တော်တော်ဖီလ်းရှိမှာဘဲကွာ ငါလိုးချင်နေပြီကျော်ကျော်ရေ..’မြတ်မင်းဟျောင့်ငါလဲလိုးချင်တယ် တကယ်လိုးခွင့်ရရင်ငါအရင်လိုးမှာကွရှင်းလား.ကျွန်တော်ဟောက်သံနဲ့ပြောလိုက်တော့မြတ်မင်းတွန့်သွားတယ်အစကတည်းကလူကြောက်စိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဘဲလေဟဲဟဲ. “အေးပါကွာ”စဖုတ်ကစဖုတ်ဘဲလိုးရကျေနပ်ပါတယ်ကွာကျော်ကျော်ရာ”မင်းအရင်လိုးပေါ့ ပြီးမှငါလိုးတာပေါ့”။ ဒီလိုဘဲလေမစားရအညှော်ခံတာတောင်သူများထက်အရင်လိုးချင်တာဗျ။ ဒါပေမယ့်ကျောင်းခန်းထဲရောက်တော့ဆရာမဝင်လာပုံကကြွကြွရွရွနဲ့နို့တွေကလဲခုန်တတ်နေတာဘဲ မှန်းကြည့်ရင်အသီးလေးတောင်မြင်ရမှာဘဲ.ဖင်ကလဲဘေးတိုက်ဝင်လာတော့တင်းပြီးကော့တတ်နေတာဗျ.ဒါနဲ့ဘဲစာသင်နေကြတယ်.ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်သည်.လုပ်မယ်ကွာလို့စိတ်ထဲမှာပြောရင်း.မြတ်မင်းကိုပါပြောလိုက်တယ်”ဟျောင့်မင်းလုပ်ရဲလား”ဘာလဲဟ”ဘာမေးတာလဲငကျော်ရ” မင်းကိုလုပ်ရဲလားလို့မေးနေတာငတုန်းရဲ့”မြတ်မင်းပြုံးတတ်သွားပြီးမျက်နှာပြန်သေ သွားတယ်။ ရှေ့ကဆရာမကိုမြတ်မင်းလှမ်းကြည့်ပြီးကျွန့်ကိုပြန်ပြောတယ်..ဟျောင့်ငါလဲမင်းလိုဘဲတအားဆာနေပြီမရတော့ဘူး မင်းလိုအတွေးမျိုးငါလဲခုတွေးနေတာကွ။ “စိတ်ချင်းတူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့၂ယောက်.စကားကိုဘောင်ဖွဲ့ပြောစရာမလိုဘဲ.ခေါင်းညှိတ်ပြပြီးစာဆက်သင်နေကြတယ်. တကယ်တော့အချိန်ပိုသင်တဲ့မနက်ဖြန်ညနေမှာစာကိုသေချာနားမလည်အောင်လုပ်သလိုလ်ုနဲ့ကျွန်တော်တို့၂ယောက်ထဲအခန်းထဲကျန်ခဲ့အောင်နေခဲ့မယ်.ပြီးရင်ဆရာမကိုမြတ်မင်းကချုပ်ကျွန်တော်ကလိုးမယ်ပေါ့။ […]
Posted on December 23, 2020 Author admin	Comments Off on တအားစောင့်နေတာ